Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: Refugee Roundtable
There will be “Refugee Roundtable” at the US embassy in New Delhi.
If you have any important but general suggestions for the plight of all refugees from Burma, please send in writing or email to me before4PM on 8-3-2010. Please do not send individual matters.
အမေရိကန်သံရုံးမှ ခေါ်ယူကျင်းပမည့် “ဒုက္ခသည်စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ” တခု သို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးရန် ရှိပါသည်။ မည်သူမဆို အရေးကြီးသော၊ အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျွန်တော့်ထံသို့ ၈-၃-၂ဝ၁ဝ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၄ နာရီအတွင်း စာဖြင့်ရေးသား ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။ တဦးချင်းကိစ္စများ သည်းခံပါ။
NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၊
Yamuna Clinic ယမုန်နာဆေးခန်း။
Posted by Dr. Tint Swe at 5:46 AM